နိုင်ငံသားအဖြစ်အဘို့ပြင်ဆင်နေ | USAHello | USAHello
Find out if you are eligible for US citizenship. ဆက်ဖတ်ရန်
This page will help you complete the N-400 form. ဆက်ဖတ်ရန်
You will be asked many questions at your citizenship interview. ဆက်ဖတ်ရန်
It is important to know what the words on the N400 form mean. ဆက်ဖတ်ရန်
Find downloadable pdfs of the civics test questions in9languages. ဆက်ဖတ်ရန်
Sign up for our free citizenship prep class. ဆက်ဖတ်ရန်
ပထမဦးဆုံးအကြိမ်မဲဆန္ဒရှင်: ပထမဦးဆုံးအကြိမ်တစ်ဦးကဒုက္ခသည်မဲUSA တွင်တစ်ဦးပထမဦးဆုံးအချိန်မဲဆန္ဒရှင်ဖြစ်လာမယ့်အံ့သြစရာအတွေ့အကြုံကိုဖွစျစနေို. သူမခံစားရဘယ်လို USAHello အင်တာဗျူးတစ်ဦးပထမဦးဆုံးအချိန်မဲဆန္ဒရှင်
မဲမှမှတ်ပုံတင်မည်: ဒုက္ခသည်များနှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတစ်လမ်းညွှန်မဲပေးအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. မဲပေးနိုင်ပြီးဘယ်လိုမဲရန်သင့်အားမှတ်ပုံတင်နိုင်သူကိုအကြောင်းသတင်းအချက်အလက် Read.
အမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်လာတစ်ဦးက USA နိုင်ငံသားဖြစ်လာအသစ်ရောက်ရှိလာသောအဘို့စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်ပါသည်. သင်ပိုမိုအခွင့်အရေးနှင့်အခွင့်ထူးရ. ဒါပေမယ့်သင့်အိမ်၏နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်မှနှုတ်ဆက်လို့ပြောဖို့ခက်ခဲဖြစ်မည်အကြောင်း